पानी भर्न जाग्राम ! « News of Nepal
पानी भर्न जाग्राम !
खरले छाएका साना झुपडी। पुर्व पश्चिम महेन्द्र राजमार्ग छेउमै एकै नासका ३० घर जति खरका झुपडीहरु छन्। वस्तीको एउटा कुनामा धारा छ । धारालाई घेरा हालेर पक्की संरचना पनि बनाइएको छ । त्यही धाराको भित्तामा लेखिएको छ ’कृपया हातखुट्टा नधोईदिनुहोला’ पानी थाप्न, लुगा धुन र भाँडा माझ्न उपयोग हुने उक्त ठाउँ सुख्खा छ ।
यही बाटो भएर दिनहुँ जसो नेता र नेतृत्व ओहोरदोेहोर गर्छन। तर यो बस्तीमा उनीहरुको ध्यान भने पुग्न सकेको छैन । गढवा १ कालाकाँटे (डाँडाटोल) का ३० घरधुरीलाई पानीका लागि ठुलै संघर्ष गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
चुनावका बेला घरघरमा पानीका धारा भन्दै नेताले आश्वासन बाँडेको यो बस्तीले भुलेको छैन। चुनाव जितेर पदमा पुगेका नेता फर्केर नआएकोमा उनीहरूको दुखेसो छ।
‘चुनावका बेला नेता यही झुपडीमा आउथे, स्थानीय गोबिन्द बोहराले दुःखेसो पोख्दै भन्नुभयो, ‘बाटो नजिकै दुःख कटाएर बसेका छौँ। हाम्रो पीडा कसैले सुनेनन्।’
घरैपिच्छे पैशा उठाएर बनाएको कुवा त छ, त्यही कुवाबाट मोटर मार्फत टँंकीमा पानी आपुर्ती हुन्छ । तर कुवा नै सुकेपछी त्यहाँ पानीको संकट चुलिएको हो । “बोरिङ्ग गर्नको लागि ठूलो रकम हामी सँग छैन,केसी कुमारी सुबेदीले भन्नुभयो( ६० सालदेखी पानीको समस्या झेल्दै आएको उहाले सुनाउनुभयो।
साबिक गोबरडिहा गाबिसले निर्माण गरिदिएको
दुई हजार क्षमताको टँकिले गाउँलाई पुग्ने भएपनि त्यहाँ बिहानै देखि रित्तो गाग्रीको ताँती लाग्छ । दिनमा कुवामा पानी रसाउदैन, मध्यरातमा जम्मा भएको पानीले प्यास मेट्छन स्थानीय । जम्मा भएको पानीलाई टँकि सम्म सप्लाई गर्नको लागि उनिहरु रातभर सुत्दैनन् । मध्यरातमा मोटर चलाउन कै लागि भनेर घरैपिछ्य पालो लगाईएको छ । “पालो पर्ने दिन त पुरै परिवार सुत्न पाँईदैन, स्थानिय प्रेम पुनले भने(निदाएपछि त कसैलाई एक घैँटो पानी मिल्दैन ।“
सबैसँग खानेपानीको योजना माग गरेपनि आफ्ना योजना प्राथमिकतामा पर्न नसकेकोमा स्थानिय चिन्तित छन् ।
यता गढवा १ का वडा अध्यक्ष बाबुराम अधिकारीले १३ लाख बराबरको बोरिङ्गको योजना अघि सारेको बताउनुभयो । “पुराना योजनाका बजेट सबै कुवामै थुपारियो, बजेट पनि कमि नै हुन्थ्यो, अधिकारीले भन्नुभयो दिगो योजना नबनाए कै कारण समस्या थपिएको हो ।“ डाँडाटोल मात्र नभएर वडा १ अन्तर्गतका सबै गाउँ टोलमा पानीकै अत्याधिक समस्या रहेको उहाले जानकारी दिनुभयो ।
कोरोना संक्रमितको ‘माया’ : ‘दुर्व्यवहार गर्नेलाई